အမှတ်အသားများ (Tags): နံရံပေါ်ရှိရေချိုးခန်းပုံးများတပ်ဆင်ထားသည်
အမှတ်အသားများ (Tags): ရေချိုးခန်းဗီရိုပေးသွင်းသူ, ရေချိုးခန်းကြေးမုံသေတ္တာ
အမှတ်အသားများ (Tags): Bathroom Cabinet, Bathroom Vanities
လက်ရှိအချိန်မှာ, အိမ်များရှိအိမ်သာအများစုသည်ခြောက်သွေ့။ စိုစွတ်မှုရှိခြင်းနှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်, သို့သော်အိမ်သာ၏တန်ဖိုးကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်ကိုအိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသည်. ငါရေချိုးခန်းဗီရိုပေါင်းစပ်ကြောင်းထင်ပါတယ်, ရေတွင်း, and bathroom mirrors in the bathroom isagood…
MANTANA Vanity ယူနစ်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်သည် 800 မီလီမီတာ, 1000 မီလီမီတာ, 1200 မီလီမီတာနှင့် 1,500 မီလီမီတာ. ဒါဟာကြီးမားတဲ့နှင့်အတူပါရှိသည်, အပြည့်အဝပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်, အ ၀ တ်လျှော်စက်နှင့်ပိတ်ထားသောအံဆွဲနှင့်တံခါးများ, နှင့်ဖယ်ရှားနိုင်သောသိုလှောင်မှုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူလျှို့ဝှက်ပြည်တွင်းရေးအံဆွဲ. The ceramic washbasin has no overflow.…
မည်သည့်ရေချိုးခန်းတွင်မဆိုသစ်သားအလုပ်ရုံများသည်အလွန့်အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်ဟုငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ, ဒါပေမယ့်အများဆုံးသဘာဝထုတ်ကုန်နှင့်ဝသကဲ့သို့, worktop သည်၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားသည့်နေ့ကဲ့သို့ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်. FRANK မှာ, အစိုင်အခဲသစ်သားအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုကမ်းလှမ်းထက်, we have four…
ခေတ်မီအသွင်ဆောင်သောဂန္ထဝင်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောထုံးစံအတိုင်းနစ်မြုပ်သည်. Elegance of genuine Italian Carrara marble vanity with sink and brass feet is designed to bring our customer elegance and contemporary home. Select from several finishes to coordinate the mirror seamlessly with the washstands…
ရေချိုးခန်းထဲမှာကြေးမုံရှိတယ်. ငါတို့မိတ်ကပ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်. နံနက်ယံ၌ထ။ မျက်နှာကိုဆေးကြောခြင်း၊, ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောအလှဆင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးအလွန်လက်တွေ့ကျသည်. There are many types of bathroom mirrors…
4 ယခုလူကြိုက်များနေသောရေချိုးခန်းဗီရို၏စတိုင်များ, မင်းဘာသိလဲ
ရေချိုးခန်းအလှဆင်ခြင်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည်. တကယ်တော့, ရေချိုးခန်းဗီရို၏စတိုင်များကိုလည်းအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်. ရေချိုးခန်းထဲမှာအကောင်းဆုံးအလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်စတိုင်ရွေးချယ်မှုအလွန်အရေးကြီးပါသည်. The style of the…
စစ်မှန်သောနှင့်မှားယွင်းသောအစိုင်အခဲသစ်သားပုံးခွဲခြားရန်နည်းလမ်း： 1. Olfactory ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနည်းလမ်း: Most solid woods have woody fragrance, pine has pine resin smell, camphor wood has obvious camphor smell, but fiberboard and density board will haveastrong irritating smell, especially in the cabinet door or inside. 2. Tactile…
နှစ်ဆအင်တုံရေချိုးခန်းဗီရို၏အရွယ်အစားကဘာလဲ? အလှဆင်သည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများရှိရမည်. ယခုအရွယ်အစားရွေးချယ်မှုသည်အကြောင်းများစွာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်. အမှန်တကယ်ရွေးချယ်ရေး၌တည်၏, ကျနော်တို့ပြည့်စုံအစီအစဉ်ကိုလုပ်ရပေမည်. Here we takealook at the items that must be paid attention…